चुनाव विरोधी डा. बाबुरामको छद्मभेषमा किन सिखण्डी बन्दैछन उपेन्द्र यादव ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
जब संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा भवनमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा वडो भावुक शैलीमा सार्वजनिक हुदै थियो, एक निमेषमै बाहिर निस्किएर उनै डा. बाबुराम कुर्लिए, यो संविधान अपूर्ण छ, त्रुुटीपूर्ण छ । त्यसको लगत्तै उनी मधेशतिर झरे अनि संविधान जलाउने सभाहरुको नेतृत्व गरे । संविधानको स्वागतमा देशभर दीपावली हुदै गर्दा डा. बाबुराम संविधान जलाउने मशाल बोकेर देश दौडाहामा लागे ।
आम नेपालीलाई थाहा छ, पहिलो संविधानसभा बिना संविधान मृत हुनुुमा तत्कालिन सरकार जिम्मेवार थियो । अनि जनतालाई यो पनि थाहा छ, त्यो संविधान सभालाई बिना उपलव्धी मृत्युुमा धकेल्ने सरकारका प्रमुख थिए डा. बाबुुराम भट्टराई । उतिबेलाका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष । दोस्रो संविधानसभा चुनाव गैर दलीय सरकारको नेतृत्वमा हुने गरी राजनीतिमा न्यायलयलाई मिसाएर खिलराज रेग्मी नेतृत्वको निर्दलीय सरकारको रचना र स्थापनामा सबैभन्दा उच्च योगदान थियो उनै एकीकृत माओवादीकालिन उपाध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामकै ।
वर्तमान संविधान कुनै पनि कारणले सर्वस्वीकार्य र अपनत्वबिहीन छ भने त्यसको सूत्रधार अनेकन पात्र र प्रवृत्ति मध्ये शीर्ष एक हुन डा. बाबुराम नै । किन की पहिलो कुरा उनी संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । उनले अरु त अरु डा. सीके राउत जस्ता विखण्डनकारीको पनि सिंहदरवारमै स्वागत गरेर संविधान रचनाको राय सुुझाव लिएका हुन । दोस्रो उनै डा. बाबुरामले संविधान छिटो जारी गर्ने नाममा यति धेरै बिबादाष्पद कुरा संविधानमा समेटे की यो भगवानले धेरै राम्रो प्राणी रचना गर्दा ऊट बने जस्तै बन्यो संविधान ।
मानवताविरोधी कत्लेआमको दशक लामो माओवादी जनयुद्धकालिन डा. बाबुुरामलाई हेगको यात्रामा नपठाएर उदार बनेको नेपाली समाज अहिले उनै जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पिएचडीवाला डाक्टरको षडयन्त्रको राप र तापमा पार्न खोजिदैछ । बुढी मर्लीभन्दा काल पल्केला भन्ने हदमा डा. बाबुरामको छदमभेषी चुनाव विरोधी मुकुुण्डोबाट सचेत हुुुनुुपर्ने गुुदी कुरो यही छ ।
अझ महत्वपूर्ण तेस्रो कुरा जब संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा भवनमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा वडो भावुक शैलीमा सार्वजनिक हुदै थियो, एक निमेषमै बाहिर निस्किएर उनै डा. बाबुराम कुर्लिए, यो संविधान अपूर्ण छ, त्रुुटीपूर्ण छ । त्यसको लगत्तै उनी मधेशतिर झरे अनि संविधान जलाउने सभाहरुको नेतृत्व गरे । संविधानको स्वागतमा देशभर दीपावली हुदै गर्दा डा. बाबुराम संविधान जलाउने मशाल बोकेर देश दौडाहामा लागे । तर उतिबेला संविधान जलाउदै नयाँ मधेश मसिहा बन्ने डा बाबुरामको तुुरुप हावा खायो । अनि उनी कहिले उम्दा प्रजातन्त्रवादी त्यागी बन्दै सभाषद पद त्याग्न पुुगे । कहिले खुुंखार प्रजातन्त्रवादी हुुदै आफ्नै माउ पार्टी माओवादीको उछितो काढ्न पुुगे त कहीले नयाँ शक्ति नामक डेट एक्स्पायएरहरुको झुण्ड बनाउन पुुगे ।
यसप्रकार माओवादी शान्ति राजनीतिमा आएदेखि नै कुनै न कुुनै रुपमा राजनीतिक कलह, संकट र समस्या खडा गर्न माहिर र रातोदिन व्यस्त उनै डा. बाबुुराम फेरि करीब दुुई दशकपछि प्रचण्ड सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव रोक्न, भाँड्न र असफल पार्न अराजनीतिक हर्कत प्रश्तुुत गरिरहेका छन । मानवताविरोधी कत्लेआमको दशक लामो माओवादी जनयुद्धकालिन डा. बाबुुरामलाई हेगको यात्रामा नपठाएर उदार बनेको नेपाली समाज अहिले उनै जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पिएचडीवाला डाक्टरको षडयन्त्रको राप र तापमा पार्न खोजिदैछ । बुढी मर्लीभन्दा काल पल्केला भन्ने हदमा डा. बाबुरामको छदमभेषी चुनाव विरोधी मुकुुण्डोबाट सचेत हुुुनुुपर्ने गुुदी कुरो यही छ ।
बेतुुकपूूर्ण बाबुराम जिकीर :
हो, पूूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले चुनाव नगर्नका लागि सरकारले मिति घोषणा गरेको हाँस्याष्पद दाबी गरेर आफ्नो असली अनुहार उदाँग पारेको छ । गत साल असोज ३ मा संविधानसभा भित्रबाट संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभा परिसरमा संविधानको खरो विरोध गरेका नेता भट्टराईले अस्तीसम्म छिटो चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिदै आएका थिए । तर आज सरकारले स्थानीय चुनावको तिथि तोकेर तयारी तिव्र पार्दै गर्दा स्थानीय चुनावका लागि बिभिनन ६ सर्त अघि सारेर अप्रत्यक्ष रुपमा चुनाव को विरोध गरेका छन ।
अघिल्लो दिन मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव घोषणापछि आव्हान गरेको पहिलो सर्वदलीय वैठक बहिष्कार गरेका नेता भट्टराईको दल नयाँ शक्ति नेपालको विशेष राजनीतिक समितिको बैठकले एक वर्षभित्र हुनुपर्ने तीन तहकै चुनावका लागि आफू शर्तसहित भाग लिन तयार रहेको बताएर सबैलाई हसाएको छ । एकै चरणमा चुनाव हुन नसक्ने जान्दाजान्दै यो रहस्यमयी माग किन उठायो नयाँ शक्तिले ? कुनै पनि राजनीतिक दलले चुुनावमा भाग लिन शर्त राख्ने कस्तो प्रजातान्त्रिक शैली हो यो ?
नयाँ शक्तिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलीय भागवण्डामा चुनावको घोषणा गर्न थालिएकाले यो सत्ता स्वार्थका लागि र चुनाव नगर्नका लागि घोषणा गरिएको चुनावका रुपमा यसलाई लिइएको छ ।’ दलिय भागवण्डामा चुनाव घोषणा गरिएको हाँस्याष्पद तर्क गरेर नयाँ शक्तिले नगर्ने चुनाव सरकारले घोषणा गरेको दलील पेश गरेको छ । जब की राजनीतिक तथा नागरिक तप्काबाट १८ वर्षपछि पहिलो पट्क स्थानीय चुुनाव हुन लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गरिएको छ भने सरकारको निर्णय स्वागत गरिदै आएको छ । यसरी जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगको विधि चुनावविरोधी कुण्ठा व्यक्त गरे नयाँ शक्तिले चुनाव विरोधी बेमौसमी बाजा बजाउन सुुरु गरेको छ ।
सर्वपक्षिय सरकारः बेमौसमी बाजाः
सिधै सरकारद्धारा घोषित स्थानीय चुनावको स्वागत नगरेर चुुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको नयाँ शक्तिले संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि संशोधन र यसको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको ०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वपक्षीय सरकार अनिवार्य शर्त भएको दाबा गरेको छ । काम कुरो एकातिर नयाँ शक्तिको ध्यान सत्तातिर भन्ने असली चरित्र प्रश्तुुत गर्दै यसले चुनाव बिथोल्ने नयाँ अस्त्र फ्याकेको छ ।
स्थानीय चुनावको मुखमा विपक्षी एमाले लगायतको ९ दलीय गठबन्धनले समेच नमागेको सर्वपीक्षय सरकार किन चाहियो डा. बाबुरामलाई ? सुविधाजनक बहुमतमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको मिलिजुुली सरकारलाई बिस्थापित गरेर नयाँ सरकारको दरकार किन सबैभन्दा पहिले नयाँ शक्तिलाई परयो ? नयाँ शक्तिलाई पनि सत्तामा नबसी चुनाव गर्दा पत्तासाफ हुने मनको बाघले खाएकै कारण उसलाई सर्वदलीय सरकार चाहिएको हो त ?
स्थानीय चुनावको मुखमा विपक्षी एमाले लगायतको ९ दलीय गठबन्धनले समेच नमागेको सर्वपीक्षय सरकार किन चाहियो डा. बाबुरामलाई ? सुविधाजनक बहुमतमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको मिलिजुुली सरकारलाई बिस्थापित गरेर नयाँ सरकारको दरकार किन सबैभन्दा पहिले नयाँ शक्तिलाई परयो ? नयाँ शक्तिलाई पनि सत्तामा नबसी चुनाव गर्दा पत्तासाफ हुने मनको बाघले खाएकै कारण उसलाई सर्वदलीय सरकार चाहिएको हो त ? संसारमा चुनाव घोषणा भएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास कसरी प्रजातान्त्रिक माग हुन सक्छ ? चुनाव घोषणा भैसकेको, सत्ता साझेदार दलहरु बीच कुनै खटपट र चिसोपना नै नदेखिएका बेला नयाँ शक्तिलाई चाहिएको सर्वदलीय चुुनावी सत्ता उसको सत्तालिप्साको हद नै हो । विचार र नीति नै गलत भएका कारण बाबुुरामको दल काम लाग्ने भएन तपाईहरु नयाँ शक्ति बन्नुस भनेर राप्रपाको महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको शुुभकामनालाई नै डा. बाबुुरामले चरितार्थ गरेका हुन त ?
निविर्ककल्प चुनावमा के को शर्त ?
नयाँ शक्ति नेपालले चुनावका लागि वार्तावरण बनाउन आग्रह गर्दै ६ शर्त अघि सारेको छ । उसले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलाई पहिलो शर्त बनाएको छ । तर नयाँ शक्तिले संविधान संसोधन पास गराउन कुनै सकारात्मक दबाब दिएको छैन, सर्वदलीय वैठक बहिष्कार गरेर उसले आफ्नो असली नियत खुलस्त पारेको थियो । मुख्य विपक्षी एमाले सहितको ९ दलीय गठबन्धनको समेत उदारतामा सरकारले संसोधन प्रक्रिया संसदमा अघि बढाईसकेको तथ्यलाई नयाँ शक्तिले चाल नै नपाएको नाटक गरेको छ ।
२०५२ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० सुत्रिय माग राखेर जंगलल पसेका डा. बाबुुरामले आफू सरकारमा हुदा तिनै आफूले पेश गरेका ४० सुत्रिय मागलाई धोती लगाए । तैपनि उनको माग राख्ने नानीको बानी उस्तै देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, चुनाव खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उसको पुरानै माग छ । यो त नयाँ शक्तिको पुरानै माग हो ।
साथै प्रदेशको सिमांकन विषय हल गर्दै स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विवाद अन्त्यका साथै सर्वपक्षीय सरकार गठनलाई पनि नयाँ शक्तिले सर्तका रुपमा नै अघि सारेको छ । जब की सरकारले एक साताभित्रै पुर्नसंरचनाको काम सक्ने कार्यादेश सहित स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको सरकारी समिति मार्फत अहोरात्र काम गरिररहेको छ । नयाँ स्थानीय तहमा चुनाव हुने गरी तयारी बढ्दा नयाँ शक्तिलाई टाउको दुुख्नुु निकै बिडम्वनापूर्ण छ ।
के यो माग पेश गर्ने बेला हो ?
२०५२ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० सुत्रिय माग राखेर जंगलल पसेका डा. बाबुुरामले आफू सरकारमा हुदा तिनै आफूले पेश गरेका ४० सुत्रिय मागलाई धोती लगाए । तैपनि उनको माग राख्ने नानीको बानी उस्तै देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, चुनाव खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उसको पुरानै माग छ । यो त नयाँ शक्तिको पुरानै माग हो । तर यो माग यतिबेला संविधान संसोधनको दौरानमा पुरा गर्न गर्नुुपर्ने उसले कुनै कसरत गरेको छैन । साथै नयाँ शक्ति नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न पनि माग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नै आर्थिक , प्राविधिक तथा जनशक्ति र अन्य कारणहरुले तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने संभावना नरहेको भनी स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा नयाँ शक्तिले एकसाथ चुनाव माग गर्नुु भनेको चुनाव विरोधी आफ्नो मुकुुण्डो उदांग पारेको तथ्य हो ।
जनताको परीक्षामा फेल हुने भय हो ?
पूर्व माओवादी नेताहरुको अगुवाई र डा. बाबुरामको नेतृत्वमा गठित नयाँ शक्ति केन्द्रमा तामझामका साथ उदाएको तर जनस्तरमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको जनतासंग अनटेष्टेड नयाँ दल हो, जो आफैमा फुट परस्त हुदै आएको छ, जन्मदादेखि नै । नयाँ दलले सत्तामा नबसी चुनाव सामना गर्दा चौतर्फी हार्ने त्रासले नै उसले चुनाव टार्ने नयाँ तरीका खोजेको हुुनपर्छ । होईन भने संसारमा स्थानीय चुनावको विरोध गर्ने र पर सार्ने कुनै पनि दल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र नयाँ शक्ति पनि त्यसको अपवाद हुनै सक्दैन ।
बहादुर ९ भाईद्धारा नै लोप्पाः
जनताको भावना बिपरित चुनाव भाँड्ने डा बाबुरामको षडयन्त्र आकाशतिर फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखमा परे जस्तै हुन पुुगेको छ, तै पनि उनको अरु षडयन्त्र जारी छ । चुुनाव हुुनुुपर्नेमा नयाँ शक्ति पार्टीका बहादुर ९ भाईले सार्वजनिक विज्ञप्ती मार्फत माग गरे उनलाई लोप्पा खुुवाउन त सुुरु गरेका छन तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डां बाबुराम र संघीय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति चुनावविरोधि र एक्लो निर्णय भन्दै नयाँ शक्तिका नौ जना केन्द्रिय परिषद सदस्यहरुले आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन डा. भट्टराईलाई आह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले बिहबिार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराई र यादवले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति चुनाव विरोधी भएको भन्दै बैठक नै नबसी गरिएको निर्णय आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । निर्मल भट्टराई, मोहन बम, देव लिम्बु , हरिाम रिमाल, चन्द्रदेव ओझा, युवी घिमिरे, सहदेव न्यौपाने अशोकराज ढुङगेल र मुनिन्द्र बस्नेतले विज्ञप्तिले बाबरामको चुनाव विरोधी हर्कत नाँगिएको छ । तर आफ्नै सहयोद्धाको लोप्पापछि पनि डा. बाबुरामको शुद्धी फिरेको भने छैन ।
जति ठूला शव्द खर्च गरेर अनि संघीय समाजवादी वा अन्य कुनै पनि दलको समर्थन लिए पनि अहिले निर्वाचन स्थगित गर्ने अभियानको नेतृत्व डा. बाबुराम र उपेन्द्रले गर्नुु भनेको प्रजातन्त्रको स्थानीय अभ्यासको खिल्ली उडाउनुु नै हो । बाबुरामसंग अनायाशै उपेन्द्रले पनि लोलीमा बोली मिलाउनुु चाँही निकै रहस्यमयी षडयन्त्र नै हो । कुनै पनि मानेमा आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैं चुुन्न पाउने आम नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी स्थानीय चुनाव स्थगित गर्ने माग न प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ, न त जनपक्षिय नै ।
उपेन्द्र यादव किन बन्दैछन सिखण्डी ?
दक्षिणी छिमेकको आर्शिवाद प्राप्त नेपाली नागरिकताधारी दल हो नयाँ शक्ति भन्ने आलोचकहरुको आरोपलाई प्रमाणित गर्ने गरी डा. बाबुरामको दलले स्थानीय चुनावलाई शर्तमा त्राशले छेक्न गरेको प्रयाश यदि दक्षिणी ईशारा नै हो भने त्यो झन देशका लागि घातक हो । मधेशी मोर्चाले समेत संविधान संसोधन भए चुनावमा भाग लिने भनिरहेका बेला संसोधनलाई पार गराउन शक्ति नलगाई चुनाव हुनका लागि बेमौसमी सत्तासाझेदारीका शर्त राख्ने नयाँ शक्तिको चाला चुनाव विरोधी नै हो । तर यस्तो जनपवरोधी डा. बाबुरामको कुकर्मको सिखण्डी उदाउदा मधेश नेता मानिएका उपेन्द्र यादव पो बन्न थालेका छन ।
वुधवार स्थानीय तह लगायत तीनै तहको निर्वाचनका लागि सर्वपक्षिय सरकारको माग अघि सारेका नयाँ शक्तिका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिहिबार संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय चुुनाव स्थगन गर्न माग गरे । वुधवार एक्लै हुदासम्म मोही माग्ने ढुुंग्रो लुुकाउने शैलीमा प्रश्तुुत भएका नेता भट्टराई बिहिबार संघीय समाजवादीको साथ पाएपछि भने चुनाव नै स्थागित गर्नुुपर्ने माग गर्न पुुगे ।
जति ठूला शव्द खर्च गरेर अनि संघीय समाजवादी वा अन्य कुनै पनि दलको समर्थन लिए पनि अहिले निर्वाचन स्थगित गर्ने अभियानको नेतृत्व डा. बाबुराम र उपेन्द्रले गर्नुु भनेको प्रजातन्त्रको स्थानीय अभ्यासको खिल्ली उडाउनुु नै हो । बाबुरामसंग अनायाशै उपेन्द्रले पनि लोलीमा बोली मिलाउनुु चाँही निकै रहस्यमयी षडयन्त्र नै हो । कुनै पनि मानेमा आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैं चुुन्न पाउने आम नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी स्थानीय चुनाव स्थगित गर्ने माग न प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ, न त जनपक्षिय नै । सत्तामा बसेर चुनाव गराउने लालसा डा. बाबुराम वा उपेन्द्रकोे हो भने पनि कम्तिमा अब स्थानीय चुनावको हकमा त्यो पुरा हुन सक्दैन । स्थानीय चुनावको स्थगनको माग गर्नुु भनेको काम कुरो एकातिर कुुमलो बोकी अर्कैतिर भन्ने राजनीतिक मुुख्र्याई नै हो ।
हाल हिरासतमा पुुगेका र एमनेष्टी ईन्टरनेश्नल जस्तो खाँटी डलरवादी अन्र्तराष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाले प्रतिरक्षा गरिरहेका स्वतन्त्र मधेशका अभियन्ता डा. सीके राउतजस्ता अतिवादी देश विखण्डनकारीले वा जनयुद्धः २ का तयारी गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव वा मोहन वैद्य किरणहरुले चुनावको विरोध गर्नु स्वभाविक हो । किन भने उनीहरु अझै पनि यो व्यवस्था र संविधानका पक्षमा छैनन् ।
तर डा. बाबुराम जस्ले यो संविधानको रचना गरे, अनि त्यही संविधानले अनिवार्य र निर्विकल्प गरेको स्थानीय चुनाव रोक्न अहिले हठात माग संविधान संसोधन गरे मान्छुु भन्ने उपेन्द्रसंग मिलेर किन गरिरहेका हुन ? बाबुुराम र उपेन्द्रको यो हर्कत संविधानलाई सीके राउत, विप्लव वा वैध भन्दा पनि चर्को रुपमा अस्वीकार गर्नु नै हो । डा. बाबुुराम र उपेन्द्रले अहिले संविधान संसोधनको बखेडामा आगोमा घिऊ थप्दै स्थानीय चुनाव रोक्न खोज्नुु संविधानको धज्जी उडाउने र जनताको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने पाखण्डपनको प्रदर्शन नै हो । जनताले सरकारद्धारा घोषित स्थानीय चुनावको देशव्यापी स्वागत गरिरहदा किन जनताको विरुद्धमा उभिने दुुस्साहस गर्दैछन डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ? स्थानीय चुनाव नहुदा निम्तिने संवैधानिक संकट र संघीयताको कार्यान्वयनमा थपिने जटिलताका तुलनामा स्थानीय चुनाव स्थगित गर्नुु कसरी समाधानको सूत्र हुन सक्छ ?
जनतालाई भोट हाल्ने अधिकारबाट रोक भन्ने आँट र हैसियत डा. भट्टराई र उपेन्द्रहरुलाई कहाँबाट कस्ले दियो ? के जनताभन्दा माथि हुन उनीहरु ?. संसारमा चुनाव नै हो प्रजातन्त्रको प्राण, अभ्यास र सम्मान । चुनाव नै हो जनादेशको स्रोत, व्यवस्था बलियो पार्ने जग र भर पनि । तर त्यो नाँगो सत्यमाथि धाबा बोल्दै गरेका डा. बाबुराम र उपेन्द्रहरुलाई अब उनीहरुको जनविरोधी हर्कतका बाबजुत पनि जनताले हातमा दही जमाएर बस्न हुुन्न नी हुुन्छ र भन्या ?
अब मोर्चाले प्रचण्ड सरकारले आफना माग पुरा गराएन भन...